Koeman: Barcelona waxay u baahan tahay inay sameyso saxiixyo Suuqa ah.
Home Horyaalka Spain Koeman: Barcelona waxay u baahan tahay inay sameyso saxiixyo Suuqa ah.
Tababaraha reer Holland ayaa sheegay inuu sii wadi doono dhaleeceynta ciyaartoydiisa hadii uu dareemo inaysan waxqabad sameyn
Ronald Koeman ayaa sheegay in Barcelona ay u baahan tahay inay dhex gasho suuqa kala iibsiga hadii ay horumar sameyneyso, laakiin uusan kalsooni ku qabin in la siiyo lacag uu ku xoojiyo kooxdiisa.
Barcelona waxaa ka danbayso Atletico Madrid ee La Liga ka dib markii ay si hoose ku bilowdeen horyaalka. inkastoo ay feecnaayeen toddobaadyadii la soo dhaafay waxayna ku socdaan seddex guul oo isku xigta oo horyaalka ah.
Guushaas ay ka gaareen Huesca , Athletic Bilbao iyo Granada ayaan mugdi gelin karin xaqiiqda ah in kooxda Koeman ay ka maqan tahay awood qoto dheer taas oo ay u badan tahay inay si adag ugu garaacdo loolanka loogu jiro La Liga iyo Champions League .
Previous articleManchester Unitedd oo dib u dhigtay go’aanka mustaqbalka Lingard
Next articleKooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa si fool ka fool ah ugu dhaqaaqi doona saxiixa Dayot Upamecano